Iti iRosemary, Izibonelelo zezeMpilo ➡ Discover Discover Online ▷ ➡️
I-rosemary sisixhobo esithandwayo esisetyenziselwa ukupheka ukutya okunencasa. Nangona amandla okupheka engenamda, ikwasetyenziswa kakhulu njengeti.
Sisityalo esifikelelekayo esigcwele amandla ezempilo. Akumangalisi ukuba iti i-rosemary isetyenziselwe amawaka eminyaka njengendlela yokunyanga iingxaki ezahlukeneyo zempilo, ukusuka kumkhuhlane, ukukhwehlela, nokubanda, ukuya kobunzima ngakumbi, kudityaniswe namanye amayeza okuphilisa iipropathi. Funda malunga nezibonelelo ezinokubakho kwezempilo kunye nokusetyenziswa kweti ye-rosemary.
1 Ucebile kwi-antioxidant, antimicrobial and anti-inflammatory compounds.
2 Inceda ukunciphisa inqanaba leswekile yegazi
3 Ukuphucula imemori kunye nemood
4 I-Turbine ingqondo
5 Khusela umbono
6 Ezinye izibonelelo zeti ye-rosemary
Ucebile kwi-antioxidant, antimicrobial and anti-inflammatory compounds.
Antioxidants yimixube enceda ukukhusela umzimba kumonakalo we-oxidative kunye nokudumba, okunokukhokelela kwizifo ezinganyangekiyo ezinje ngomhlaza, isifo sentliziyo, kunye nohlobo lweswekile 2. Banokufumaneka kwiindawo ezahlukeneyo zokutya kwezityalo, ezinje ngeziqhamo kunye nemifuno, kunye imifuno efana nerosemary.
Iti yeRosemary ikwaqulathe iikhompawundi ezinokuthi zibe nezinto ezichaseneyo nokudumba kunye neentsholongwane. Umsebenzi we-antioxidant kunye ne-anti-inflammatory we-rosemary ubizwa ngokuba yi-polyphenols, njenge-rosmarinic acid kunye ne-acid.
Izithako zesiselo zinokuba neepropathi zokulwa neentsholongwane, ezinceda ukulwa usulelo. Amagqabi eRosemary asetyenziswa kunyango lwesintu kwiziphumo zokulwa neentsholongwane kunye nokuphilisa.
Inceda ukunciphisa inqanaba leswekile yegazi
Ukuba ishiywe inganyangwa, i-hyperglycemia ingonakalisa amehlo, intliziyo, izintso kunye nenkqubo ye-nervous. Ke ngoko, kubalulekile ukuba abantu abanesifo seswekile balawule ngokufanelekileyo amanqanaba eswekile yegazi.
Izifundo ezenziwa kwiYunivesithi yaseHong Kong kunye neYunivesithi yaseBrock eCanada, umzekelo, zibonise ukuba ukusetyenziswa kweti ye-rosemary kunganciphisa iswekile yegazi, icebisa ukuba imifuno inokuba nezicelo ezinokubakho zokulawula iswekile yegazi ephezulu phakathi kwabantu abanesifo seswekile.
Ukuphucula imemori kunye nemood
Uphando kwiYunivesithi yezoNyango e-Kerman, e-Iran, kwafumanisa ukuba ukuthatha i-500 mg ye-rosemary ngomlomo kabini ngemini kangangenyanga kunciphise amanqanaba oxinzelelo kunye nenkumbulo ephuculweyo kunye nomgangatho wokulala phakathi kwabafundi beekholeji xa kuthelekiswa ne-placebo.
Uhlalutyo oluvela kwiDyunivesithi yase-Isfahan, ekwi-Iran, luhamba kunye nabasebenzi abangama-66 abasuka kolu shishino kangangeenyanga ezimbini. Uye waphawula ukuba abo basela iitispuni ezi-2 (4 iigrem) zerosemary kwiikomityi ezi-2/3 (i-150 ml) zamanzi ngemini zichaze ukuba bazive bediniwe kakhulu kwimisebenzi yabo, xa kuthelekiswa nabo bangaselanga tu.
Uphando lwezilwanyana kwiYunivesithi yaseKharazmi, eTehran, eIran, lubonisa ukuba irosemary inokuxhasa ukubuyela kwimeko yesiqhelo enokubangela ukonakala kwengqondo.
Kwangokunjalo, olunye uphononongo olwenziwe kwiYunivesithi i-RMIT e-Australia ligqibe kwelokuba i-spice inokuthintela iziphumo ezibi zokuguga kwengqondo, nokuba iphakamise nefuthe lokuzikhusela kwizifo ze-neurodeergenerative ezinje nge-Alzheimer's.
Isifundo esivela kwiYunivesithi yaseWright State eMelika kuvavanye ukongezwa kwerosemary ekhutshwe kunyango oluqhelekileyo. Uhlalutyo lufumanise ukuba imifuno yanceda ukulibaziseka kwe-macular degeneration, imeko eqhelekileyo echaphazela umbono.
Ezinye izibonelelo zeti ye-rosemary
Ngamana unokuxhamla impilo yentliziyo;
Inceda ukunciphisa umzimba.